Igama le-WOLF Umthombo kunye nenjongo
I-WOLF - Igama lomntu igama kunye nomthombo
Isibongo se-Wolf ngokuqhelekileyo sibizwa ngokuba ngumnxeba okanye isichazi esichazayo kwi-Old English wulf , echaza "ingcuka." Inokuthi ibe negama lendawo yomntu ohlala endlwini ephawulwe ngumqondiso wempisi. Njengegama le-Irish, i-Wolf ingaba yipelo eguqukileyo yegama lokugqibela elithi Woulfe, uhlobo oluthile lwe-Gaelic Ó Faoláin, oluthetha "inzala yeFoolán," igama elihle livela kwi- faol , elisho "ingcuka."
Amagama afana neLOPEZ athathwe kwiFomus ifom.
I-WOLF yiyona nkcukacha ye-17 exhaphakileyo kwiJamani .
Igama lomthombo: isiJamani , isiNgesi , isiDanish
Igama elithethiweyo Ukuchongwa : I- WOLFE, i-WOLFES, i-WOOLF, i-WOOLFE, i-WULFF, i-WOOF, i-WOOFE, i-WOLFF, i-WOLFFE
Kuphi kwihlabathi ngaba abantu abane-WOLF Surname Live?
Ngokutsho kweWorldNames ngu-PublicProfiler, isibongo se-Wolf sisona sifumaneka kakhulu eJamani, silandelwa ngu-Austria, emva koko i-United States. Ngaphakathi kweJamani, igama lixhaphake kulo lonke elasezantsi eJamani, ngakumbi kwimimandla yaseSachsen, eRheinland-Pfalz, eHessen, eT Thuringen, eBraern naseSaarland. Idatha yokusaba ngegama kwi-Forebears ibonisa isibongo se-Wolf esona sikhulu kakhulu e-Austria, esilandelwa yiSwitzerland, i-Israel, iNetherlands kunye ne-United States. Upelo lwe-Wolff lwefestile lufumaneka ngokuqhelekileyo eJamani.
Abantu abaPhezulu abanegama elibizwa ngokuba ngu-WOLF
U-Ernst Wilhelm Wolf - umqambi we-18 wenkulungwane yaseJamani
UPeter Wolf - umculi waseMerika; elide elikhokela phambili kwi-Band Geil
UYohn Rudolf Wolf - isayensi yeenkwenkwezi yaseSwitzerland kunye nesazi semathematika
UDavid Wolf - i-American astronaut
Izibonelelo zoGenesalogy kwi-WOLF Igama
Ulwalamano lwentsapho yaseWolf yaseBrensbach, eJamani
Jonga ikopi yedijithali yembali yentsapho ka-1999 nguC.
W. Lundberg yentsapho yaseWolf esuka eBrensbach, eJamani, eya ku-United States ngo-1832.
Iprojekthi yegama leWoolf DNA
Iprojekthi ye-Woolf-Wolfe-Wolf-Wolff ye-DNA ivulelekile kubo bonke abantu abaneentlobo ezahlukahlukeneyo zeenkcukacha ze-Woolf okanye zeWolf abanomdla wokusebenzisana ukuze bafumane ifa labo elifanayo ngokubelana ngolwazi lwembali lomndeni kunye nokuhlolwa kwe-DNA.
Iforum yoLwazi lweNtsapho yoLuntu
Khangela le bhansela elithandwayo lokuzalwa lomnxeba wefowuni ye-Wolf ukuze ufumane abanye abangaphanda ookhokho bakho, okanye uthumele umbuzo wakho wefowuni.
I-FamilySearch - I-WOLF Genealogy
Hlola ngaphezu kwezigidi ezi-3.3 ezirekhodi zembali kunye nemithi yentsapho edibeneyo yomgca etholakalayo kwigama le-Wolf kunye neenguqu zayo kwiwebhusayithi ye-FamilySearch yamahhala.
Igama legama le-WOLF kunye neNcwadi yoLondolozo lweentsapho
I-RootsWeb ibamba amanani amaninzi angabhaso adibanisa abaphandi bebheno le-Wolf.
DistantCousin.com - I-WOLF Genealogy & History Family
Iinkcukacha zolwazi zamahhala kunye neefalo zokuzalwa zohlobo lwegama lokugqibela.
Inzala Yobubele kunye neNtsapho Page
Dlulisa amehlo kwiirekhodi zomnxeba kunye neenkcukacha ezibhalwe kwizahlulo zemveli kunye neembali zabantu ngabanye abanegama lesibongo kwi-website ye-Genealogy Today.
Menk, uLars. I-Dictionary yeJamani yamaYuda amagama. Avotaynu, 2005.
Beider, Alexander. Inkcazelo yeeSudames zamaYuda ezivela eGalicia. Avotaynu, 2004.
Indlela yokuphanda i-UK Coal Mining Ancestors
I-PATTERSON Igama Igama kunye Nemvelaphi
Igama likaReyes Igama kunye Nemvelaphi
I-WAGNER Igama lomnqophiso kunye neNtsapho yeMbali
ISITHOMBE SOMSEBENZI INDLELA NOMQONDO
PEREZ - Igama elithi & Origin
UMOREL - Igama lomnqophiso kunye neNtsapho yeMbali
Uvavanyo lweZliniki kunye nesicelo seSikole sezonyango
Ngubani owayengumongameli endala kunabo bonke baseUnited States?
Ulwimi lweSuku lweValentine: uLwimi lokuFunda ngeeNkcukacha, iifayile kunye neMifanekiso
I-Deifintiion yasePadawan, i-Jedi Apprentice
Uluhlu lweeKholeji ze-Intanethi ezivunyiweyo
Ama-5 aphezulu aMazwe kwi-Surf
Funda iiTire zakho
ULevi Strauss kunye neMbali ye-Invention ye-Blue Jeans
Ukusebenzisa imibala ephambili kwi-Art
Iikholeji eziphezulu zeMississippi
Oothixo Bothando Nomtshato